खुल्यो एभरेष्ट फिल्म एकेडेमि , टिममा को को ? | kollywood Update
खुल्यो एभरेष्ट फिल्म एकेडेमि , टिममा को को ?
असार २ कलिउड अपडेट ।
अव नेपाली चलचित्र क्षेत्रले पनि शिक्षित व्यक्ति पाउने भएको छ । नेपालमा पनि फिल्म एकेडेमिको आवश्यकता महसुस गर्दै चलचित्रकर्मिहरुको एक जम्वो टोलिले राजधानिमा एभरेष्ट फिल्म एकेडेमि नामको फिल्म एकेडेमि आज देखि सन्चालनमा आएको छ । सुचना तथा सन्चार मन्त्रि शेरधन राइको मुख्य आतिथ्यमा एकेडेमिको बिधिवत् ओपनिङ गरिएको छ ।
आज बाट सुरुवात भएको यस एकेडेमिमा ‘निर्देशन, अभिनय, छायांकन र सम्पादन–भीएफएक्स’ पढाइनेछ ।
१ बर्षभित्र कुनै एक विधामा दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्ने लक्ष्य यो एकेडेमीले लिएको छ । कलेजमा सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिइने भन्दै डिरेक्टर उज्ज्वल घिमिरेले भने–‘यसका लागि आवश्यक प्रविधी यो एकेडेमीमा उपलब्ध छ ।’